आज माग्ने बुढाको जन्मदिनमा श्रीमतीको यस्तो खुलासा ! यो बानी सुधार्न आग्रह (भिडियो) « Np Online TV
आज माग्ने बुढाको जन्मदिनमा श्रीमतीको यस्तो खुलासा ! यो बानी सुधार्न आग्रह (भिडियो)
हास्यटेलिशृङ्खला “मेरी बास्सै” मा माग्ने बूढाको भूमिका निभाएर दर्शकमाझ लोकप्रिय बनेका केदार घिमिरे अहिले भने यो श‌ृङ्खलामा देखिँदैनन्। केदारले ‘मेरी बास्सै’ छोडेको वर्षौं भयो तर अहिले पनि उनी सोही श‌ृङ्खलामा निभाएको चरित्रका कारण चर्चामा छन् ।
माग्ने बूढाले यो श‌ृङ्खलामा काम गरेर चर्चा कमाउनु अघि काठमाडौंका फुटपाथमा सामान बेच्ने काम गर्थे । उनी ती दिन सम्झँदै अहिले पनि सुनाउने गर्छन् – ‘मलाई त प्रहरीले लखेटेरै कलाकार बनाएको हो ।’ ‘मेरी बास्सै’ मा केदारले अर्का हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ सँग सहकार्य गरेका थिए ।